Saafi Films - News: Daawo Muuqaal: Gabar Ceeboowday Kadib Markii Silig Dheer Oo Ay Ka Boodaysay Dharkii Uu Kala Haray
Daawo Muuqaal: Gabar Ceeboowday Kadib Markii Silig Dheer Oo Ay Ka Boodaysay Dharkii Uu Kala Haray
Wadanka Australia ayaa waxaa ka dhacday arin la yaab leh taasoo ah in gabar ay isku dayday inay ka boodo silig dheer oo ka hareersanaa goob lagu qabanayay bandhig muusik ah balse ceeb xun ay kala kulantay.
Siliga ay gabadhu ka boodaysay ayaa waxaa ku qornayd erayo digniin ah oo oranaya "lama fuuli karo" ama lagama boodi karo balse gabadhaan ayaa iska indha tirtay wayna fuushay balse intaysay dhinacay rabtay u gudbin ayaa waxaa maradi ay hoos ka qabtay kala haray oo dilaaciyay siligii iyadoo dad fara badani daawaneeyeen fadeexad xuna ay soo gaartay gabadhaasi.
Arintaan ayaa ka dhacday magaalada Melbourne ee dalka Australia. Gabadhaan ayaa lo oran karaa way nasiib badantahay sababtoo ah wax dhaawac masoo gaarin waayo haduu siligo qabsan lahaa jirkeeda halis bay ahaan lahayd.
Muuqaalkaaan ayaa waxaa daawaday in ka badan nus milyan labadii maalin ee oogu horaysay ee lasoo galiyaay Youtube-ka.
4,480,375 unique visits